Orinasa kitapo tsy tenona | Mpanamboatra kitapo tsy tenona any Sina, mpamatsy
Vokatra Vaovao mafana Kitapo fivarotana tsy misy tenona any Shina
Miasa ho an'ny ho avy tsaratsara kokoa sy tontolo iainana ara-tontolo iainana isika. Noho io antony io dia mamokatra harona eco-friendly sy% 100 azo ampiasaina izahay. Ny vahaolana tsara indrindra amin'ny kitapo fiantsenana na kitapo tote dia kitapo tsy tenona, kitapo tenona pp, ary kitapo landihazo. Mpanamboatra kitapo tsy misy fanjairana izahay, kitapo tsy misy tenona ultrasonika, kitapo tenona pp, kitapo landihazo, kitapo ary canvas izay ampiasaina ho kitapo miantsena, kitapo tia eco, kitapo fampiroboroboana, kitapo eny an-tsena, ary tote kitapo;
Amboaran-tsarimihetsika ambongadiny Wholesale China China Shopping Shopping Pp Nonwoven Bag Black White Blue Non-woven Promosional Bags
Hanokana ny tenanay izahay hanolotra ireo mpiantsena hajaina miaraka amina serivisy manam-pahaizana be fientanentanana indrindra ho an'ny kitapo fampiroboroboana tsy misy tenona matihanina. Miarahaba antsika mpanjifa, fikambanana ara-barotra ary namana akaiky avy amin'ny singa rehetra eto an-tany mba hifandray aminay ary hangataka fiaraha-miasa hahazoana valisoa.
Orinasa matihanina China Eco Nonwoven Bag, manantena ny hiara-miasa akaiky aminao izahay amin'ny tombon-tsoa sy ny fampandrosoana ambony. Niantoka kalitao izahay, raha tsy nahafa-po ny mpanjifa ny kalitaon'ny vokatra dia azonao atao ny miverina ao anatin'ny 7 andro miaraka amin'ny fanjakana niaviany.
Mpivarotra kitapo tsy tenona tsy mpanenona Avy any Shina
Natao manokana: Mety tsara amin'ny fanomezana ho an'ny orinasa, fanomezana amin'ny fividianana, fanomezana amin'ny mariazy, fitaovana fampiroboroboana, fitsingerenan'ny andro nahaterahana, tsingerintaona ary maro hafa.
Andao isika hanomboka amin'ny dian-kevitrao: Ataovy pirinty amina sary famantarana ny entanao, na zavatra hafa nofidianao hatao pirinty amin'ilay zavatra. Raha te hampiditra sary famantarana ianao dia soraty ao anaty boaty fanaingoana ny "LOGO" dia hifandray aminao izahay noho ny kanto nataonao.
Tote fiantsenana namboarina ultrasound PLA Non Woven Bag
Kitapom-batsy polypropylene vita amin'ny laoniny vita amin'ny kitapo PP tsy tenona
Varotra amidy mafana laminated fotsy tsy tenona fanao amin'ny pirinty
Fanontana logo manokana Kitapo kitapo tsy misy tenona vita amin'ny plastika vita amin'ny lamina
Ny kitapo tsy misy tenona dia iray amin'ireo kitapo miantsena malaza azo ampiasaina eran'izao tontolo izao. Vidiny mora vidy, azo ampiharina ary mety tsara hampiroboroboana ny marikao. Safidy isan-karazany amin'ny endriny, loko, s ary fomba samihafa.
Vita amin'ny lamba tsy tenona (ny lamba vita amin'ny polypropylene, Spun-bond) lamba tsy tenona vita amin'ny fitaovana pp virjina mahatonga ny kitapo haharitra kokoa. Ny hatevin'ny lamba tsy tenona dia avy amin'ny 60gsm ka hatramin'ny 120gsm.
Ambongadiny customization avo lenta kitapo misy loko tsy tenona kitapo
Logo namboarina vita pirinty lamaody mora fiantsenana laminated Laser tsy tenona Tote Bag
【Varotra tena izy】 Ny orinasa dia mamokatra kitapo fivarotana azo antoka azo ampiasaina, mora vidy kokoa raha oharina amin'ny marika hafa. Ny habe lehibe kokoa, ampy anao hamonosana izay tianao. Kitapo tantanana tonga lafatra ho an'ny fiantsenana, fivarotana, fitsangatsanganana, fitahirizana ary azo ampiharina amin'ny fampiasana isan'andro!
Kitapom-batsy vita pirinty momba ny tontolo iainana namboarina sy tsy voaisy fonosana
Ny kitapo tsy misy tenona multigpose dia fomba tsara hanehoanao ny marikao na ho fanomezana mety tsara ho an'ny olon-tianao.
Misy ny fanontana amin'ny lafiny roa. Manasongadina kalitao ara-tontolo iainana, mety sy azo ampiharina.
Ny PP tsy tenona dia lafo ary manome kalitao miavaka.
kitapo fividianana fanao amin'ny fampiroboroboana ny vidin'ny kitapo tsy tenona miaraka amin'ny fanontana